RASMI: Real Madrid oo ku dhawaaqday inuu qandaraaska u kordhiyey Marcelo – Imisa sanno ayuu sii joogi doonaa? - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
RASMI: Real Madrid oo ku dhawaaqday inuu qandaraaska u kordhiyey Marcelo – Imisa sanno ayuu sii joogi doonaa?
Daafaca heerka caalami ee dalka Brazil Marcelo ayaa qandaraaska u kordhiyey kooxdiisa Real Madrid – qandaraaskii hore ee uu Marcelo kula jiray Los Blancos wuxuu dhacayey 2020ka.
Si kastaba ha ahaatee, Los Blancos ayaa qandaraaska Marcelo haatan gaarsiisay illaa sannadka 2022ka.
Maamulka Los Blancos ayaa ku dhawaaqay inuu Marcelo qandaraaskaan ku saxiixi doono xaflad Khamiista saxaafadda loo qaban doono, laakiin haatan labada dhinac ayaa ku heshiiyey inuu Marcelo illaa 2022ka sii ahaado Santiago Barnabeu Stadium.
Daafaca dambeedka bidix ayaa ku sugnaa Real Madrid tan iyo 18 sanno jirkiisii, wuxuuna kooxda ka dhisan Estadio Santiago Bernabeu kusoo biiray sannadkii 2007dii, hadda waa kabtan ku xigeenka Real Madrid wuxuuna kooxda difaacaneysa koobka UEFA Champions League u saftay 415 kulan.
Qandaraas kordhintiisa ayaa la micno ah inuu Marcelo haatan indhaha ku hayo inuu gaaro rikoorka Real Madrid ee halyeeyga uu ku daydo ee dalka Brazil Roberto Carlos kaasoo ah xiddiga ajnabiga ah ee ugu safashada badan Los Blancos maadaama uu 527 kulan u ciyaaray kooxda ka dhisan caasimadda Spain.